जापानमा सन्तानः जन्माउनु र हुर्काउनुको यथार्थता | Nepali In Japan
हामी सानै छँदा नै सुन्दै आएको कुरा हो, जापान एउटा बिकसित मुलुक हो । धेरै पहिले नेपालबाट जापान आउने नेपालीको संख्या निकै थोरै भएर होला, त्यो बेला नेपालीको लागि जापानएउटा सपनाको संसार जस्तो नै लाग्दथ्यो ।
पहिलेको तुलानामा हाल नेपालीको संख्या बढेको र आउने माध्यम पनि बिभिन्न किसिमका हुने भएकोले पहिले जस्तो महत्व नभएपनि, नेपालमा रोजगारको अभाव, आउनको लागि अलि बढि खर्चिलो भएर होला धेरैका लागि अहिले पनि जापान सपनाको शहर हुन सक्छ । बिभिन्न भिषामा जापान आई आफनो परिवार (श्रीमान वा श्रीमतीलाई) जापान बोलाई सकेपछि बच्चा जन्माएर हुर्काउने, जापानमै राख्ने प्रकृयामा केहि अनुभवहरू यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु । यि मेरा नितान्तै व्यक्तिगत विचार र देखेभोगेका अनुभवहरु हुन्, यहाँ बसोबास गर्दै आइरहनुभएका सबैको हकमा यि कुरा लागु नहुन पनि सक्दछन् ।
जापानको स्वास्थ्य क्षेत्र यहाँ बसोबास गर्ने बिदेशी नागरिक (जसले स्वास्थ्य बीमा गरेको छ र यो अनिवार्य छ)
सबैका लागि पहुँचको कुरा हो । बिश्वका स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल मानिएका देशहरूमध्ये जापान पनि एक हो । बच्चा पेटमा बसिसकेपछि आमाको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नभएमा साधारणतया २–३ महिनामा हस्पिटल जान सकिन्छ । यसको लागि छुट्टै किसिमको महिला हस्पिटल हुने गर्दछ र आफु बसेको स्थानबाट नजिक र पायक पर्ने हस्पिटल छानेर जान सकिन्छ । यो बिचमा श्रीमतीलाई भाषाको समस्या छ भने श्रीमान पनि संगै जानुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया धेरै डिपिन्डेन्टमा आएका महिलामा हस्पिटलमा बोलिने भाषामा केही समस्या हुने हुंदा पनि श्रीमान संगै जानुपर्ने हुनसक्छ । श्रीमानको काममा छुट्टी मिलाउने देखी रेल स्टेशन टाढा भएको र आफुसंग गाडि छैन भने जाने आउने कुरामा समस्या हुन सक्छ । काममा भनेको बेला छुट्टि नपाउने, भाषाको पनि समस्या हुने, आफुसंग सवारी साधन पनि नभएको अवस्थामा कतिजनाले बच्चा जन्माउनको लागि नेपाल पठाउने गरेको पनि पाईन्छ । बच्चा नेपाल जन्माए पनि यहाँ स्वास्थ्य बिमाबाट पाईने करिब ४ लाख जति पैसा भने प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यहाँका हस्पिटलले राम्रो सेवा दिने हुनाले धेरै जनाले भने जापानमा नै जन्माउन चाहेको बुझिन्छ । जापानमा बच्चा जन्माउँदा लाग्ने खर्चमध्ये अधिकांश पैसा बीमाले बेहोर्ने हुँदा ठूलो खर्च भने हुँदैन ।
जापानमा बच्चा जन्माई सकेपछि तत्काल आमा काममा जान नपाउने हुँदा आम्दानि थोरै भएको अवस्थामा भने केहि समस्या हुन सक्छ । एक जनाको कमाईबाट परिवार हेर्न सक्ने अवस्था वा राम्रो कमाई भएकाहरूलाई त त्यति समस्या नहोला तर एउटाको कमाईबाट परिवारको खर्च धान्न मुस्किल हुने अवस्था छ भने चाँही गार्हो पर्न सक्छ । त्यसैले कतिपयले ‘जापानमा बुढाबुढी बसेर अलिअलि बचाउन सकिएन भने के अर्थ भयो र’ भन्ने खालका कुरापनि गरेको सुनिन्छ । सानो बच्चा छोडेर काममा जानुपर्दा पनि आफ्नै खालका दुःखहरू हुन्छन नै ।
यहाँ बच्चा जन्मेको ५–७ महिनाबाटै होईकुयन (साधारण तया मन्टेसरी) मा राख्न मिल्ने ब्यवस्था पनि हुन्छ तर शुरूमा होईकुएन पनि आफु बसेको वडा कार्यलय मार्फत जानुपर्ने हुँदा कोटा फुल भएको अवस्थामा केहि समय कुर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । कतिपयले लामो समय कुर्दा पनि होईकुयन नपाएको गुनासो सुनाउनुहुन्छ । होईकुयन परे पनि आफुसंग सवारी साधन नभएको र होईकुयन अलि टाढा भएको अवस्थामा भने लाने–ल्याउने समस्या पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा यहाँ सानो–सानो स्वस्थ्य समस्यालाई पनि गम्भिर रूपमा हेरिने हुँदा बच्चा होईकुयन भएको अवस्थामा कुनै सानो समस्या भएपनि तत्काल अभिभावलाई बोलाइने गर्दछ । त्यो समयमा आमाबाबु दुबै काममा भएको अवस्था रहेमा केही झन्झटिलो हुने गर्दछ । कतिपय आमाबुवाले बच्चालाई होईकुयनमा नराखी आफुलाई पाएक पर्ने कामको सिफ्ट राखेर पालैपालो बच्चा हेर्दै, काम गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ ।
बच्चा १–२ बर्षको भएपछि नेपाल राख्ने की आफुसंगै राख्ने भन्ने दोधार भने धेरै अभिभावकहरुमा देखिन्छ । कुनैपनि बच्चाका लागि आफ्ना आमाबुवाको काख भन्दा बढि खुशी त अन्त कहाँ मिल्ला र ?
जापानमा सबै कुराको ब्यवस्था राम्रो भएको परिवारलाई र लामो समय जापानमै बस्ने सोंच बनाएको परिवारले त बच्चा आफुसंगै राख्ने गरेको पाईन्छ । तर यहाँ हुर्काउने क्रममा नेपालमा हुर्केको बच्चाको तुलानामा बोली स्पष्ट हुन समय लाग्ने, आमा बाबु दुबै ब्यस्त रहँदा बच्चा मोबाईल वा ट्याबमा बढि ध्यान दिने, धेरै मान्छे देख्दा डराए जस्तो गर्ने आदि समस्या हुन्छन् भनेको सुनिन्छ । यो बिचमा बच्चा आफुसंगै राखेर काम गर्दै बच्चाको पनि स्याहार–सुसार गरेका आमाहरूको दुःख भने साच्चिकै कम हुँदैन।
बच्चालाई नेपालमा परिवारसंग छाडेर आउनेहरुको व्यथा पनि कम दुःखलाग्दो छैन । जापानमा काम गर्दै बच्चाको स्याहार गर्न गार्हो पर्ने र जापान लामो समयसम्म बस्न नचाहनेहरूले बच्चालाई नेपाल छोडेर आउनुभएको देखिन्छ ।
बच्चालाई नेपाल छाड्नु को अर्को कारणमा पढाईको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ जस्तो लाग्दछ । टोकियो र यस आसपासका शहरमा बस्नुहुनेले फि केही महङ्गो भएपनि नेपालीहरुले संचालन गरेको स्कुलमा पढाएको पनि पाईन्छ तर टोकियोदेखि टाटा हुने र आम्दानि कम हुनेहरूको लागि त यो पनि संभव भएन । जापानी स्कुलमा पढाउँदा जापानी भाषा बाहेक अर्को भाषामा पढाई नहुने हुँदा अंग्रेजी र नेपाली भाषामा बच्चा कमजोर भएको देखिन्छ । लामो समयसम्म जापानमा बस्ने हरूलाई त यहीं पढेर यहीं काम काम गर्दा सजिलो हुने भयो ,तर केही समय बसेर फर्कने सोंच हुनेहरूका लागि भने पछि नेपाल गएर पढाई नमिल्दा समस्या हुने हो कि भनेर चिन्तित भएको पनि देखिन्छ ।
मुख्यतः सानो बच्चालाई नेपालमा छोडेर आउने कि संगै राख्ने भन्ने कुरामा धेरैजना दोधारमा परेको जगजाहेर छ । आमाबाबुको को मन न हो कहाँ सजिलै बच्चालाई अरूको जिम्मा लगाउन मनले मान्छ र ? फेरी नेपालमा पनि बच्चा हेर्दिने राम्रो वातावरण र सबै कुरा मिल्नु पनि पर्यो । सबै भिन्न–भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट रहेको हुनाले पारिवारिक कुराको पनि तालमेल मिल्नुपर्यो । बच्चाको रेखदेख गर्ने काम त्यती सजिलो कहॅा हुन्छ र ? राम्रो आम्दानि भएकाहरू र लामो समय जापानमा बस्ने सोंच भएकालाई त आफुसंगै बच्चा राख्दा उत्तम होला तर दुबै जनाले काम नगरि नपुग्ने अवस्थाका अभिभावकहरु भने के गर्ने भनेर दुविधामा रहेको देखिन्छ ।
बच्चा नेपाल छोडेर आउनेहरूलाई भने चाडबाड र बच्चाको जन्मदिनमा अत्यन्तै गार्हो हुने रहेछ । मैले बुझेसम्म यो बिषयमा बाबाहरूले मन बुझाए पनि आमाको मनले भने जति दुख भएपनि बच्चा आफुसंगै भैदिएको भए भन्ने चाँही हुंदोरहेछ । मातृत्व भनेको यही होला सायद । जापानमा आफुसंगै बच्चा राखेर काम गर्दै रेखदेख गर्नुभाको वा बच्चाको भबिष्यको लागी नै मनमा गाँठो पारेर बच्चालाई नेपाल छोडी यहाँ मेहनत गर्नुभएका सम्पूर्ण दिदिबहिनी प्रति सम्मान ।
Posted in जापान अनुभव
Prevजापानी कारमा टाँसिने स्टिकर र तीनको अर्थ
Nextयस्ता छन् जापानी कम्पनीहरुमा उपलब्ध ‘कल्याण भत्ता/लाभ’को प्रकारहरु